गोंगबु बसपार्क काण्डः बन्धक पारी अप्राकृतिक यौनसम्बन्ध ! | Tungoon
गोंगबु बसपार्क काण्डः बन्धक पारी अप्राकृतिक यौनसम्बन्ध !
काठमाडौं । राजधानीका विभिन्न होटेल, रेष्टुरेन्ट, डान्सबार, मसाज सेन्टर र त्यस्ता गृह छन् जहाँ ईच्छित रुपमा यौनधन्दा चलिरहेको हुन्छ । ग्राहक र व्यवसायीको मन मिलेपछि निश्चित रकम तिरेर यौन सन्तुष्टि मेटाउने अखडा व्याप्त छन् । प्रायः यस्ता ठाउँहरुमा प्रहरीको अप्रेशन समेत फेल हुन्छ ।
धन्दा यसरी फस्टायो की केटा र केटी एकअर्काप्रति पुरै नजिक भएको बहाना गर्छन् । प्रहरीलाई ठम्याउन समेत गाह्रो पर्छ ती यौनव्यवसायी हुन् भनेर । घटना घटिसकेपछि मात्रै थाह हुन्छ । कतिपय घटना त लामो सम्बन्धपछि केही कुरामा विवाद हुँदा अर्कै रुप लिएर बाहिरिन्छन् । प्रसंग यस्तो छ– काठमाडौंमा अहिले यस्ता अखडा छन् जहाँ धेरै युवती, महिला बन्धक बनेका हुन्छन् । तिनीहरुलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर यो धन्दामा बाध्य पारिन्छ । न घर जान पाउछन् न कसैलाई भेट्न ।
मात्रै ग्राहकले भने बमोजिम सन्तुष्टि दिने मेसिन सरह उनीहरुलाई प्रयोग गरिएको हुन्छ । अहिले अवैध धन्दाको नयाँ बिषय बाहिरिएको छ, काठमाडौंको गोंगबु बसपार्कमा महिललाई बन्दी बनाएर यस्तो व्यवसायमा लगाएको फेला प¥यो । जब एक ग्राहक आएर युवतीलाई अप्राकृतिक सम्बन्ध राख्न बल गर्छन् तर ती युवतीले प्रतिवाद गर्दा उनलाई कुटपिट गरिन्छ । सधैँको पीडा सहन नसकेर प्रहरीको १०० नम्बरमा कल गर्छिन ती युवती । प्रहरी त्यहाँ पुग्छ, सबै वस्तुस्थिति बुझ्दा कोठीको शैलीमा त्यहाँ यौन व्यवसाय चलिरहेको पत्ता लाग्छ ।१५ वर्षीया युवतीमाथि चरम यातना भइरहेको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । प्रहरीका अनुसार ती युवतीलाई आफन्तले हेला गर्दा आफै केही गरेर खाने भन्दै होटेलमा काम गर्न पुगेकी थिईन् । अन्तमा कोठीवालले आफ्नो कब्जामा लिईन् ।
म्याग्दीकी मनु छन्त्यालले यस्तो धन्दा चलाइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीविरुद्ध मानव बेचबिखनको मुद्दा दायर गर्ने प्रहरीको भनाइ छ । हाल उनलाई म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको महानगरीय प्रहरी प्रभाग महाराजगञ्जले जनाएको छ । १५ वर्षमुनिकी किशोरीको हकमा भने जबर्जस्तीकरणी उद्योग गरेको मुद्दा पनि दायर हुनेछ । घटनाको अनुसन्धान गर्दा धेरै तथ्यहरु फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । कविता खाजा घरजस्तै गोंगबु बसपार्क र बालाजु क्षेत्रमा जबर्जस्ती यौन कार्यमा लगाउने धन्दाहरु चलेको आशंका प्रहरीको छ ।
काठमाडौंमा बाहिरिएको यो डरलाग्दो घटनाले धेरै युवतीहरु यस्तो धन्दामा फसेको हुनसक्ने प्रहरीको आशंका छ । नेपाल जस्तो मुलुकमा कुनै महिला धम्की र त्रासमा यस्तो धन्दामा लागेको होला भन्ने कल्पना बाहिरको बिषय हो । तर, राजधानीको डरलाग्दो दृष्यले सबैलाई झस्काएको छ ।
Previousसेनाका ठेक्कापट्टामा सेनापतिका सालाको चलखेल, कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई ठेक्का ?
Nextबूढीगण्डकीमा ५ हजार रोपनीको मुआब्जा अन्योलमा
बिग बाश लिगको पहिलो खेलमा ४ ओभर बलिङ गर्दै ३८ रन दिएर २ विकेट लिन सन्दिप सफल